hot-dip galvanized နှင့် electro-galvanized steel strands အကြား ခြားနားချက်-
သံမဏိကြိုးများကို သွပ်ရည်ပြုလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များစွာရှိသော်လည်း အသုံးအများဆုံးနှင့် အသုံးအများဆုံးမှာ hot-dip galvanizing နှင့် electro-galvanizing တို့ဖြစ်သည်။Hot-dip galvanized steel strand- hot-dip galvanizing နှင့် hot-dip galvanizing ဟုခေါ်သော hot-dip galvanizing သည် ထိရောက်သောတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်...
သွပ်ရည်စိမ်စတီးလ်ကြိုး- သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးကို ဆွဲငင်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် သုံးဘီးအမျိုးမျိုး၊ လျှပ်စစ်ကားများ၊ စက်ပစ္စည်းဘရိတ်လိုင်းများ၊ အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းလိုင်းများနှင့် မီးဆိုင်းထိန်းလိုင်းများကို အသုံးပြုပါသည်။သွပ်ရည်စတီးလ်ကြိုးအား ကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းများ၊ အားကစားပစ္စည်းများ၊ မီတာ...
Steel Wire Rope ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်တာလဲ။
1. အခြားကြိုးများအစား စတီးဝိုင်ယာကြိုးများကို အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များစွာရှိသည်- စက်မှုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကြိုးသည် လိုအပ်သောကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးအများဆုံးကြိုးမှာ သံမဏိဝိုင်ယာကြိုးဖြစ်သင့်သည်။သယ်ယူ၊ ဆွဲချ၊ ကြိမ်ဒဏ်၊ အမြင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသော...
ပလပ်စတစ်ဖြင့် အုပ်ထားသော သံမဏိကြိုးကို အသုံးပြုခြင်း
1. PVC သည် စျေးပေါသည်၊ ဝတ်ဆင်ရန် ခံနိုင်ရည်မရှိသော၊ အပူချိန်မြင့်မားစွာ ခံနိုင်ရည်မရှိပါ၊ PU ထက် အနည်းငယ်ပိုခက်သည်၊ မီးလောင်ပြီးနောက် ညှော်နံ့နှင့် အနက်ရောင်အကြွင်းအကျန်များကို အသုံးပြုမှုများ- Guardrails၊ ခြံစည်းရိုးများ၊ ဆိုင်းထိန်းများ၊ အဝတ်ကြိုးများ၊ စက်ဘီးဘရိတ်လိုင်းများ၊ ကြိုးများခုန်ခြင်း။ကြိုးခုန်ရာတွင် အသုံးများသော အရွယ်အစား 1.5 coated 2.5mm;၁....
Bangyi ထုတ်ကုန် အစုံအလင် မိတ်ဆက်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိသော သွပ်ရည်စိမ်ဝိုင်ယာကြိုးများ၊ ကာရံထားသော ဝါယာကြိုးကြိုးများ၊ သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးများ၊ သံမဏိကြိုးများနှင့် ဝါယာကြိုးကြိုးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပြည့်အစုံကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။သင်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။Bangyi တွင် ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ခြင်း အပြည့်အစုံကို ကြည့်ကြပါစို့။
ပလပ်စတစ်ဖြင့်အုပ်ထားသော သံမဏိကြိုး မိတ်ဆက်
ထို့နောက် ပလပ်စတစ်အလွှာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော သာမန်သွပ်ရည်စိမ် သို့မဟုတ် သံမဏိဝိုင်ယာကြိုးအပါအဝင် ဤထုတ်ကုန်။PVC/PU/Nylon အပါအဝင် ပလပ်စတစ်ဖြင့် အုပ်ထားသော ပစ္စည်း။အပူဖြင့် ပြုပြင်ပြီးနောက်၊ ပလပ်စတစ်နှင့် သံမဏိဝါယာကြိုးများကို ခိုင်မြဲစွာ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ပလပ်စတစ်ဖြင့် အုပ်ပြီးနောက်၊ coated steel wire ကြိုးသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်...
ဖုံးအုပ်ထားသော သံမဏိဝိုင်ယာကြိုး- မမြင်နိုင်သော Grille ၏ ပူပြင်းသောအသုံးချမှု
အိမ်၏ သက်တောင့်သက်သာ နှင့် ဘေးကင်းရေး အတွက် လူများ၏ လိုအပ်ချက် များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်၊ စက်အသစ်သည် လူကြိုက်များသော ခေတ်ရေစီးကြောင်း တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည် – The Invisible Grille မမြင်နိုင်သော Grille ဟူသည် အဘယ်နည်း။Invisible Grille သည် သင့်မိသားစု၊ အထူးသဖြင့် ကလေးများအတွက် လုံခြုံမှုပေးသည့် အဆင့်မြင့်အကင်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
hot-dip galvanized steel wire rope နှင့် electro-galvanized steel wire ကြိုးကြား ခြားနားချက်- Galvanized steel wire ကြိုးကို အမျိုးအစား နှစ်ခု ခွဲခြားထားပါသည်- hot-dip galvanized steel wire rope နှင့် electro-galvanized steel wire rope တို့ galvanizing method နှစ်မျိုးမှာ ကွဲပြားသည်- ၁။ပူ-ဃ...
သွပ်ရည်စိမ်ထားသောသံမဏိကြိုး- သွပ်ရည်စိမ်ကြိုးမျှင်သည် သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိကြိုးများစွာကို တညီတညွတ်တည်း လိမ်၍ဖွဲ့စည်းထားသော သံမဏိထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။အခြေခံအချက်အလက်- a.သံမဏိကြိုးများကို အပိုင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံအရ လေးခုခွဲထားသည်- 1×3 1×7 1×19 1×37 ခ။အမျိုးသားရေး ရပ်တည်ချက်...
ropeless skip ကြိုး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခုန်ကြိုး, ခုန်ကြိုးကိုကိုင်တွယ်, ကြိုးခုန်ဝယ်, multifun ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးခုန်သံမဏိ, ကြိုးခုန်တာ စမတ်ကျတယ်။,